मसाल महामन्त्रीमा पाँचौ पटक मोहन विक्रम सिंह !::The Online Media Product by Lekhan Nepal
मसाल महामन्त्रीमा पाँचौ पटक मोहन विक्रम सिंह !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)को आठौं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा मोहन विक्रम सिंह मनोनित भएका छन् । यो उनले मसाल नेतृत्व सम्हालेको पाँचौ कार्यकाल हो ।
यस्तो छ सिंहको जीवनी
काठमाण्डौमा भएको महाधिवेशनबाट सिंह पाँचौ पटक महामन्त्री बनेका हुन् । वि.स १९९२ बैशाख ३ गते मरुटोल, काठमाडौमा जन्मिएका सिंहको स्थायी ठेगाना दमदमे, ओखरकोट, प्यूठान हो ।
अर्थशास्त्रमा एम.ए. गरेका सिंह २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरि प्यूठान तथा सल्यानको मोर्चाहरुमा सहभागिता भएका थिए ।
२००८ सालमा जुद्धोदय पब्लिक हाईस्कूलको प्रथम अध्यक्षमा निर्वाचित उनी २००९ सालमा भारतीय हस्तक्षेप विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनमा एक महिना काठमाडौं भद्रगोल जेलमा थुनामा परेका थिए ।
२०१० सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका सिंह २०११ सालमा प्यूठानको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा गिरफ्तारी भई २० महिनासम्म जेल जीवन बिताएका थिए ।
२०१४ सालमा पार्टीको द्वितीय महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित उनी २०१८ सालमा पञ्चायती तानाशाही अन्तर्गत सुरक्षा कानूनमा ९ वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए ।
२०१९ सालमा जेलमा रहेको बेलामा पार्टीको तृतीय महाधिवेशनमा पोलिट ब्यूरोमा निर्वाचित उनी २०२९ सालदेखि भूमिगत जीवन बिताएका थिए ।
२०३१ सालमा ने.क.पा. (मसाल)को चौथो महाधिवेशनमा पार्टीको महामन्त्रीमा निर्वाचित उनी २०४१ सालमा रिमको स्थापना सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । २०४६ सालदेखि अर्ध–भूमिगत रहँदै आएका उनी आठौँ महाधिवेशनबाट पाँचौ कार्यकालको लागि महामन्त्री बनेका हुन् ।
अल्पमत पक्ष असन्तुष्ट
महाधिवेशनबाट अल्पमत पक्ष भने असन्तुष्ट देखिएको छ । श्रोतका अनुसार महाधिवेशनमा बहुमत पक्षले एकलौटी ढङ्गबाट समिति गठन गरेको, उर्जावान नेतालाई समितिमा नराखिएको भन्दै अल्पमत पक्षले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
नेकपा मसालमा लामो समयदेखि महत्वपूर्ण योगदान पुर्रयाएका विगत केन्द्रिय समितिमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरु विमल शर्मा, गोविन्द सिंह थापा, ओम बहादुर के सि, रुद्र पौडेल, सन्त बहादुर नेपाली, शशिधर भण्डारी, नर बहादुर पुन, नारायण योगि, राजेन्द्र ढुङ्गाना लगायत चर्चित र उर्जावान नेतालाई हटाइएकोमा असन्तुष्टी जनाएकोे श्रोतले बताएको छ ।
चौथो महाधिवेशनमा पहिलो पटक महामन्त्री भएका सिंहलाई पाँचौ महाधिवेशनले कारवाही गरेको थियो । मोहन विक्रम कारवाही परेपछी चित्र बहादुर केसी, गोविन्द सिंह थापा र भैरव रेग्मीलाई हात लिएर पार्टी फुटाएका सिंह छैठौं महाधिवेशनबाट दोश्रो पटक महामन्त्री भएका थिए ।
छैठौं महाधिवेशन पछि दुर्गा पौडेललाई बिवाह गरेको मुद्धामा छोरा समिर सिंहले पार्टीमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सिंहकाे बिवाह सम्बन्धमा आयोजना गरेको भेलाले सिंहलाई कारवाही गर्दै रामसिंह श्रीसलाई महामन्त्री बनाएको थियो ।
२०५८ सालमा तत्कालीन एकता केन्द्रसंग मसालले पार्टी एकता गरेपछी सिंह तेश्रो पटक महामन्त्रीमा चुनिएका थिए ।
२०६३ मा एकताकेन्द्र र पुर्व मसालका केही नेताहरुबाट पार्टीलाई अलग गरेर नेकपा मसालको पुनः स्थापनाको लागि सातौं महाधिवेशन गरि सिंह चौथो पटक महामन्त्री बनेका थिए भने १२ वर्षपछि काठमाडौमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट ८६ वर्षीय सिंह नै फेरी महामन्त्रीमा चुनिएका हुन् ।